कुकुरले बिरालोलाई आफ्नो दूध खुवाएको दृश्यले संसारलाई नै भावुक बनायो , भिडीयो बन्यो भाईरल – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/कुकुरले बिरालोलाई आफ्नो दूध खुवाएको दृश्यले संसारलाई नै भावुक बनायो , भिडीयो बन्यो भाईरल
कुकुर र बिरालोको किस्सा सन्सारभर प्रसिद्ध छ । अझ कोही मिलेनन् भने कस्तो कुकुर र बिरालो जस्तो भनिन्छ । तर के कुकुर र बिरालोहरु मिलेर बस्न सक्छन्? यसको बाबजुद पनि यी शबु जनावरको बिचमा भएको प्रेम सम्बन्धको एक भिडियो भाइरल भइरहेको छ ।
यो देखेर कोही पनि चकित हुनेछन् । यस भिडियोमा देखाइएको छ कि कसरी बिरालोको बच्चाले कुकुरको दूध पिइरहेकी छ । यो भिडियो नाइजेरियाको गाउँको हो । यसमा, पोथी कुकुर भुइँमा रहेको छ। उसको घाँटीमा कालो पट्टा छ । बिरालोको बच्चाले यसको दुध पिइरहेको छ ।
यो भाइरल भिडियो न्यूज एजेन्सी रोयटर्सले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा साझा गरेको छ । यस ३२ सेकेन्डको भिडियोमा, केहि मानिस कुकुर र बिरालाको वरिपरि छन् । भिडियाे
यो पनि , मेरी बास्सैका बान्द्रेले टर्की फर्म चलाएर महिनामा कमाउछन् लाखौ
काठमाण्डौ । गरे के हुँदैन र ? भन्ने उखानलाई मेरी बास्सैका बान्द्रेले साबित गरिदिएका छन् । बान्द्रेलाई नचिन्ने सायदै होलान् । उनै हास्य कलाकार बान्द्रे यतिबेला बट्टै तथा टर्कीको व्यावसाय गरिरहेका छन् । उनले यो व्यावसायमा करोडौंको लगानी लगाएका छन् । उनको फर्ममा १० हजार बट्टै रहेका छन् । सुरजको भनाई अनुसार एउटा बट्टै २ सयदेखि ३ सयसम्मको हुन्छ भने उक्त बट्टैलाई १ सय ३० रुपैयामा बिक्रि हुने गर्दछ । यो हिसाब अनुसार सुरजको फर्ममा १३ लाख बराबरको बट्टै मात्रै रहेको छ ।
यति मात्रै नभई सुरजको फर्ममा बट्टैको अण्डा पनि बिक्रि हुने गर्छ । उनको फर्ममा बट्टैले दैनिक ८ हजार सम्मको अण्डा पार्ने गरेको उनी बताउँछन् । सुरजले बट्टैको एउटा अण्डालाई १० रुपैयामा बिक्रि गर्ने गरेका छन् । यस हिसाबमा सुरजले बट्टैको अण्डाबाट दैनिक ८० हजार कमाउने गरेका छन् । यसरी अण्डाको मात्रै हिसाब गर्दा सुरजले महिनामा झण्डौ २४ लाख कमाउने रहेछन् । जति लगानी त्योभन्दा दोब्बर आम्दानी गर्ने सुरज आफ्नै व्यावसायमा व्यस्त मस्त छन् ।
त्यसैगरी उनको फर्ममा ५ सय भन्दा बढी टर्की रहेको छ । एउट टर्की १० देखि १२ किलोभन्दा बढीको हुँदो रहेछ । एउटा टर्की बेच्दा १२ देखि १४ हजारसम्म पर्ने रहेछ । सुरजको भनाई अनुसार उनको फर्ममा ६५ देखि ७० लाख बराबरको टर्की मात्रै रहेछ । यसका साथै सुरज अर्थात बान्द्रेले केही कुखुरा पनि पालेका छन् । पुर्ण रुपमा बट्टै तथा टर्की व्यावसायी बनेका सुरजले ती प्रजातिकालागी व्यवस्थित खोरको व्यवस्था गरेर यतिबेला आफ्नै व्यावसायमा ब्यस्त देखिन्छन् ।